Sidee si ay u gudbiyaan Video ka Android inay iPad ee One Click
> Resource > iPad > Sidee si ay u gudbiyaan Video ka Android inay iPad
Hayso iPad iyo argo dhaqaaqo video aad jeceshahay ka phone Android ama kiniin ah in ay, si aad u daawan kartaa shaashadda weyn oo dhalaalaya? Saraaxa hadlayay, waa in yar oo dhibaato, ka fiirsaneysa nidaamyo kala duwan qalliinka. Haddii aad tahay qof ka careysan arrintan ku saabsan, waxaan hubaa in ay Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac noqon doonaa mid caawisa oo adiga kuu wanaagsan. Waxaa loo sida qalab kala iibsiga telefoonka, MobileTrans kuu ogolaanaysaa inaad videos ka Android wareejiyo iPad ee qiimaha hal-guji aad mouse.
Sida loo video ka Android wareejiyo iPad
Qaybta hoose ku diiradda saarayaa sida ay u guuraan oo dhan videos ku kaydsan telefoonka Android ama kiniin in iPad ah iyadoo la isticmaalayo version Windows ah. Marka ugu horeysa, download qalab iyo hubi tallaabooyinka fudud sida soo socota.
Orod qalab kala iibsiga telefoonka - Wondershare MobileTrans ee kombiyuutarka. Suuqa ayaa aasaasiga ah soo baxa ee aad PC screen Windows. Dooro Phone in hab Transfer Phone.
Ku rakib Lugood kombiyuutarka si loo hubiyo Wondershare MobileTrans sameysay hab sax ah.
Tallaabada 2. Isticmaal fiilooyinka USB in ay ku xidhmaan telefoonka Android / kiniin iyo iPad
Isticmaal USB Apple ah fiilooyinka in ay ku xidhmaan labadaba Android phone ama kiniin iyo iPad in computer. Markaas, waxaad ku arkeysaa in uu furmo. Inta u dhaxaysa laba telefoonada yihiin saxday oo dhan files in la dhaqaajin karin ka Android inay iPad. Waxaad u baahan tahay in meesha laga saaro ay calaamaddu ku taal ka hor files kale marka laga reebo video
Fiiro gaar ah: telefoonada Android iyo kiniiniyada soo saaray Samsung, HTC, Sony, Motorola, LG iyo ka badan yihiin si buuxda u taageeray. Dhammaan iPads, dhihi iPad, iPad hawada, mini iPad, iPad 2, iPad bandhigay isha iyo iPad New in ay maamulaan macruufka 9, 8, 7, 6, & 5, si fiican u taageeray.
Tallaabada 3. Transfer video ka Android phone in iPad
Ugu geeska hoose waa xaq, xogta oo cad ka hor inta nuqul tab. By waa sax, oo aad ka saari karto oo dhan hadda videos on your iPad si gaar ah loo badbaadiyo kuwa ka phone Android ama kiniin.
Hadda, waxaa la gaaray waqtigii ay. Guji Start Copy . Wada hadal A soo baxa, kuwaas oo aad ka eegi kartaa habka geedi socodka video kala iibsiga.
Ka dib markii la isticmaalayo Wondershare MobileTrans in ay filimada ka Android wareejiyo iPad, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si ay u maareeyaan video on your iPad. Halkan, waxaan jeclaan lahaa in aad soo bandhigto a Tababaraha iPad awood badan. Waa ay TunesGo Wondershare . Waxay kaa caawinaysaa in aad wareejiso badan oo videos, music, sawiro, xidhiidhka ka dhexeeya aad iPad iyo computer si fudud.